Ipai Laser Kufungisisa Mirror, Laser Mirror, CO2 Laser Inoratidzira Mirror, Yakakwira Reflectivity Mirror, Mirror Optical Kubva China Mugadziri
Tsanangudzo:Laser tichifungisisa Mirror,Laser Mirror,Mirror Optical,Laser Magirazi,,
Zvigadzirwa zve Mirror , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Laser tichifungisisa Mirror , Laser Mirror vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Mirror Optical R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
19mm Dhayamita Monocrystal Silicon Mirror
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivha kana yealuminium firimu kana dielectric firimu kumashure kwegirazi rekuona nekupenda kwekuvhara. Iko kushandiswa kwegirazi rekuratidzira kwakakwirira...
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivha kana yealuminium firimu kana dielectric firimu kumashure kwegirazi rekuona nekupenda kwekuvhara. Chigadzirwa Chigadzirwa: 45degree YAG Reflector Mirror...
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivha kana aluminium firimu kana dielectric firimu kuseri kwegirazi rekuona nekuvhara kwekutsiva. Chigadzirwa Chigadzirwa: 45degree YAG Reflector Mirror...
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivheri kana aluminium firimu kana dielectric firimu kuseri kwegirazi rekuona nekuvhara kwekutsiva. Iko kushandiswa kwegirazi rekuratidzira kwakakwirira...
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivheri kana aluminium firimu kana dielectric firimu kuseri kwegirazi rekuona nekuvhara kwekutsiva. Chigadzirwa Chigadzirwa: 45degree YAG Reflector Mirror...
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivha kana aluminium firimu kana dielectric firimu kuseri kwegirazi rekuona nekuvhara kwekutsiva. Iko kushandiswa kwegirazi rekuratidzira kwakakwirira...
China Mirror Vatengi
Realpoo Optics inopa emhando yepamusoro magirazi ekuona akakodzera kune ultraviolet, anoonekwa uye infrared mabhendi. Simbi yemafirimu magirazi ane akanyanya kuratidzika munzvimbo yakatambanuka, nepo Broadband dielectric firimu magirazi ane akaderera ekushanda wavelength renji; avhareji reflectivity mune yakatarwa bhendi iri pamusoro kupfuura 99%. Zvemagirazi substrate, isu tine N-BK7, Fused Silica, Silicon, Molybdenum nezvimwe.
Laser tichifungisisa Mirror Laser Mirror Mirror Optical Laser Magirazi Laser Cheka Mirror